Sare u kac ku yimid Hilibka Xalaasha ee laga cuno wadanka Netherlands (Sawiro) – SBC
Sare u kac ku yimid Hilibka Xalaasha ee laga cuno wadanka Netherlands (Sawiro)
Waxaa marqura cirka isku shareeray hilibka xaalasha ee laga cuna dalka Holland ka dib markey soo baxday hadalo la doonayo in lugu hakiyo qaliinka xoolaha lugu sameenaya ama gowrac arintan ayaa waxaa ay sameyn balaaran ku yeelatay dadka Islaamka ee ku dhaqan dalka Holland.
Waxaa markii hore la kala siisan jiray kiilada hilibka ariga lacag gaaraysa 5 Euro halka imika ay gartay kilada hilibka 10 Euro waana markii ugu horeysay ee sicirka hilibka uu garo ceynkan oo kale.
Saracakan hilibka ayaa waxaa ay ku soo beekmeesa xili dadka islaamka oo u sii diyaar garoobayan gudushada bisha barakeysan ee Ramadan, Dalkan Holland waxaa kunool malaayiin qof oo Islaan ah oo ka soo kala jeeda dunida Islamka sida Ciraqiyiin , Turki, Morookan,Soomali,iyo waliba Hollanddees oo Muslimiin ah
Arinta mamnuucida hilibka xalaasha xataa waxaa ka soo horjeeda Yuhuuda ehelu kitaabka ah iyagooa ka carooday go’ aamadasi la doonayo in la dhaqan galiya.
Hilibka laga cuna dalka Holland waxaa uu ka soo galaa dalka Turkiga oo ah dal run tii ay dadkiisa ay aad ujoogaan dalka Holland kuna heystaan meherado ganacasi taasina ayaa waxaa ay tahay mid sahleysa cunista hilibka in ay ubataan suuqyada ay leyihiin dadka Turkida , waxaa kaloo aad loo isticmaalaa digaaga oo ah runtii mid si weyn ay u cunaan dadka ajaniibta ah ee ku nool dalka Holland kaasi oo laga soo galiay dalka Turkiga iyadoo waliba ay ku taalo gudaha wadanka Holandn meelo lugu xananeyo digaagda .
Wali wax go’aan ah lagama soo saarin in la hakiyo qaliinka hilibka xalaasha ah ay cunaan dadka islaamka ee ku nool dalka Holland.
Tani ayaa waxaa aadugu soo horjeestay dadka heysta madhabaha ama diimaha kal duwan sida Yuhuuda oo go’ ankaan ku tilmaamay mid loogu gafayo madhabta diintooda ee ay aaminsanyihin.
Hadaba cunida hilibka gabi ahanba lamajoojin laakiin waxaa ay kasoo hojeesteen in la mariya midida laguna qalo tasina ayaa waxaa ay noqotay mid dhaliso in uu sara kac ku yimaado hilibka xaalasha ay cunaan dadka islaamka & kuwa ehel kitaabka ah.
Laakiinse waxaa ay rabata dowlada Holland in la suuxiya neefaka lan dareensiinin qalida dabadeedna midiida la mariyo waxaa TV-yada qaarkod dalka Holand lagu soo saaray marka la bireynayo neefka ariga asagoo lugu bireynayo mishiin wax kala gooya.
Halkan ka eeg warbixin arinkan ku aadan oo uu baahiyey Radiyaha Netherlands
WQ: Wariye BASHKA XAAJI LLPP